पृथ्वी राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्दा पारिपट्टी भित्तामा देखिने यो घर ! – Khabarhouse
पृथ्वी राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्दा पारिपट्टी भित्तामा देखिने यो घर !
Khabar house | २ माघ २०७६, बिहीबार ०३:४७ | Comments
काठमाडौं : पृथ्वी राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्दा पारिपट्टी भित्तामा देखिने यो घर, पहिला जस्तो देखिन्थ्यो अहिले पनि उस्तै नै देखिन्छ। तर, घर भित्रको स्वरुप भने अहिले फेरिएको छ । हरेक कोठामा सुत्ने खाट थपिएका छन। थपिन अझै बाँकी छन्, थुप्रै कला र संरचना । प्रकृति प्रेमी जो कोहीलाई यो घरले लोभ्याउँदै आएको थियो । टाढाबाट हेर्दा एक्लो देखिन्थ्यो तर थियो आर्कषक ।
त्यसैले यो घरमा युवा होटल व्यवसायी सहजनाथ खड्काले सम्भावना देखे। अनि सोचे र बनाए, परिवार, साथीभाई र आफन्त भेटघाट भएर रमाईलो गर्दै बिदा मनाउने गज्जबको गन्तव्य । सुन्दर घर, सानो अनि सुखी परिवार, हरेक मानिससँग हुन्छ, यस्तै रहर । घरका हरेक कोठाबाट देखिन्छ पारिपट्टीको सुन्दर गाउँ । अनि राजमार्गमा आफ्नै सुरले हुँकिएका सवारी साधान । खेतबारी अनि आँगनै मुनी सुसाउँदै बगिरहन्छ खोला ।
चराको चिरबिर, हरियो रनवनको स्वच्छ हावा, यहाँ बिताएका पलहरु जो कोहीको लागि अविश्मरणीय रहला । हुन त यो घर एउटा परिवार बस्नका लागि बनाईएको हो । यद्यपि, कोठाहरु थुप्रै छन् । परिवारका लागि विशेष कोठाको व्यवस्था छ । थुप्रै साथी भाई जमघट भएर बस्नका लागि त्यही अनुसारका कोठाहरु बनाईएका छन् । होटललाई अझै व्यवस्थित र बृहत् बनाउने थुप्रै छन् योजना ।
यो घरका घरमुलीलाई राजमार्गले तान्यो । बालबच्चा पढ्न जानका लागि समस्या थियो । सजिलो भयो । तर, यो घर एक्लो भयो । यद्यपि, अहिले पाहुना आउँदा, घर उज्यालो देख्दा, घरबेटी पनि दंग छन् । पृथ्वी राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्दा पारिपट्टी भित्तामा देखिने यो घर भित्रको स्वरुप भने अहिले फेरिएको छ । हरेक कोठामा सुत्ने खाट थपिएका छन। थपिन अझै बाँकी छन्, थुप्रै कला र संरचना ।